Admission requierements in Ukrainian universities. Study muUkraine
Kururama kwemashoko Passport havafaniri kuva zvishoma kupfuura 1 gore Educational Documents (The sandara / SSCE / HSSC, Bachelor kana Tenzi Degree kana achiwanika). Application Form akazadzwa nemabhii makuru (tinya pano download Application Form ), asi zvikuru nyore kushandisa paIndaneti (Application chimiro zvisingamanikidzirwi munyaya iyi)
The E-mail pamwe Scans dzinopfuura kutaurwa magwaro vanofanira ane mashoko anotevera azvaitwa
zita, Middle zita nokutora norudzi
zuva & nzvimbo yekuzvarirwa
pasipoti ukoshi (musi nyaya & expiry)
Temporary kero / Current kero (kana vakasiyana kero zvachose)
Ukrainian Africa kutanga kuti ape "Kukokwa Tsamba" kubva March / April gore negore.
Tinobvuma Applications nokuda Kudzidza ari Ukrainian Africa gore rose. Isu kuwana "Kukokwa Letters" vadzidzi vanoshandisa kuburikidza nesu ambotaurwa uye nyaya yavo "Kukokwa Letters" kubva vakasarudzwa / varumbidzwa Africa azvaitwa. The Africa ramba yakabudisa bhuku rainzi "Kukokwa Tsamba" tsamba kubva March / April kuna November (kunyanya kuratidzirwa December). Mushure March / April, zvinotora inenge 3 kushanda mazuva ngaateme "Kukokwa Kudzidza" tsamba kubva vakasarudzwa / yakarumbidza University.
* Fast rekutakura basa "TNT", "Dhl", "FedEx" kana EMS kununura "Kukokwa Kudzidza" Tsamba mukati 4 kuti 5 kushanda mazuva. Mari rekutakura basa iri 100 $ US.
The makirasi kutangira 1st September. vadzidzi Foreign vanobvumirwa kubatana kwavo Chirungu Medium Programmes kusvikira wa15 November. Vadzidzi vasvika pashure wa15 November anogona kubatana Preparatory Programme chete. Click pano nokuti zvakawanda pamusoro Preparatory Program.
* zvakavakodzera All vanobhadharwa pamusoro Patakasvika muUkraine kunze mari "Kukokwa Letter" 300 $ US & mari rekutakura "TNT", "Dhl", FedEx kana EMS 100 $ US i.e. vanosvika 400 $ US . mari iri unobhadharwa kwatiri kuburikidza Western Union kana Mari ramu kana Bank Kutamisirwa. Nokuti Tenzi / miteva Level “Invitation tsamba” kunodyira 400 $ US uye rekutakura kupomera brining nhamba kuti 500 $ US kubhadharwa upfront.
Vadzidzi vanofanira nguva dzose kupa mabha- kero yavo kosha & kuonana nhamba Application fomu.
Pamusoro muchigamuchira Invitation tsamba
Mudzidzi anofanira kutaura Ukraine Embassy yake / nyika yake kuti kushandisa kuti mudzidzi vhiza. Ukraine Embassy unotanga kugamuchira Student VISA nyaya Student Visa kubva May / June uye murambe akadzika kusvikira rechi15 November. Mune dzimwe nyika Ukraine embasi rinotanga kushanda pamwe Student VISA nyaya Student Visa kubudikidza rechi15 August rechi15 November (kazhinji zviri chinoshanda kuna December / January). Zvichitevera magwaro zvinofanira pasi muUkraine Embassy kuwana Visa Student,
Documents ndisu Arrival:
Varumbidzwa Airports International muUkraine : Kyiv (Boryspol Airport), Dnepropetrovsk, Odessa uye Kharkiv.
Mudzidzi anofanira kuva nechokwadi yokuunza kubhadhara zvose uye Documents vanotaurwa pazasi zvisakadaro Ukraine Immigration Authority anogona kuramba iye / her Entry uye dhipota ndokudzokera ake / nyika yake mudzidzi anofanira kuuya zvizere muripo muripo, pekugara muripo uye dzimwe mhosva (Cash kana Travel Cheques) vanotaurwa Courses & Mari vakasarudzwa chirongwa / University. Mudzidzi uchibvunzwa yendege Immigration Zvepamusoro pamusoro muripo muripo uye dzimwe mhosva. Mudzidzi anofanira kuuya nemari yokuwedzera kuti munhu arambe akamuka. Please kushanyira Cost Living kuti unzwe.
Internationall Passport / Traveling gwaro pamwe Ukraine Visa pairi (kosha -kwete gore asingasviki chete)
Original Kukumbirwa Tsamba yeYunivhesiti
chitupa chekuzvarwa , Kushandurirwa mumutauro wokuUkraine uye inonyoreswa kubudikidza gweta Public kana Ukraine Embassy. (Mudzidzi pasi kuunza rakashandurwa mapepa kuUkraine kana Ukraine Embassy waida shanduro panguva akadzika Visa)
Original School Zvitupa ( The sandara / SSCE / HSSC, Bachelor kana Tenzi Degree kana achiwanika ) kushandurirwa mumutauro wokuUkraine uye inonyoreswa kubudikidza gweta Public kana Ukrainian Embassy (Mudzidzi pasi kuunza rakashandurwa mapepa kuUkraine kana Ukraine Embassy waida shanduro panguva akadzika Visa)
General Health- Medical Certificate rakapa mwedzi zviviri risati pamukova kuna Ukraine kushandurirwa mumutauro wokuUkraine uye inonyoreswa kubudikidza gweta Public kana Ukrainian Embassy. (Mudzidzi pasi kuunza rakashandurwa mapepa kuUkraine kana Ukraine Embassy waida shanduro panguva akadzika Visa)
HIV- AIDS Negative Certificate wakabudiswa mwedzi zviviri risati pamukova akashandurirwa wokuUkraine Language uye inonyoreswa nokuda gweta Public kana Ukrainian Embassy. (Mudzidzi pasi kuunza rakashandurwa mapepa kuUkraine kana Ukraine Embassy waida shanduro panguva akadzika Visa)
Health Insurance rokufukidza rimwe gore / nokuti dzimwe nyika chete Chevatariri kumwedzi
Sponsorship Tsamba kubva Vabereki / Person ndiani kutakura nemari mudzidzi paaigara / kudzidza muUkraine . (Hakusi zvimiso vemarudzi ose)
Bank Statement kuratidza zvemari kugona. (Hakusi zvimiso vemarudzi ose)
12 Pasipoti saizi mifananidzo (3 * 4 masendimita )
Air Ticket ichiri kushanda gore rimwe, anofanira kuva nokoko
Kutama kadhi inofanira kuzadzwa nenzira mudzidzi ari pakusvika kuUkraine uye akaramba vakaponeswa panguva mutsigiri muUkraine.
Mudzidzi anofanira kubereka kuna Immigration Zvepamusoro apo kumba kana parwendo kunze kwenyika.